Torohevitra ho an'ny mpitsidika an'i Panama City, Panama
Any Panama City, dia mandany ny mahafantatra ireo safidy fototra sahanin'ny tetibola . Saingy misy toro-hevitra vitsivitsy sy tricks izay hamenoana anao vola bebe kokoa ary hitondra tombony fanampiny amin'ny fampiasam-bola.
Ny manaraka - tsy misy filaminana manokana - dia soso-kevitra vitsivitsy amin'ny fandaminana sy ny fankalazana ny fitsidihanao an'i Panama City. Ho avy hody ianao miaraka amin'ny zavatra fantatrao vitsivitsy, fa ireo dia hanomboka anao amin'ny làlana mankany amin'ny dingana sarotra.
Mitandrema amin'ny Sampan-draharahan'ny Fanofanana vahiny
Tsy fahita any amin'ny tanànan'i Panama ity toe-javatra ity, fa misy mpitsidika sasany kosa nanatrika izany tao amin'ny faritra Casco Viejo. Fitarihana iray milaza fa izy dia manam-pahaizana momba ny tantaran'ny faritra sy ny toetrany dia manolotra anao amin'ny manodidina ny manodidina. Ny tsotra "tsy misaotra" dia mety tsy ampy. Ny sasantsasany amin'ireny antsoina hoe mpitarika ireny dia hanohy hanaraka anao, hanondro ireo zavatra tahaka ny hoe efa eo am-panaovana azy ireo ianao. Raha mitohy mandritra ny fotoana maharitra izany, dia mety ho lasa mahery vaika izy ireo amin'ny fanangonam-bola amin'ny "fitsangatsanganany". Raha toa ka tsy mandray ny "tsy misaotra" voalohany dia aoka ianareo hiorina mafy fanindroany ary mandehana haingana. Raha vao hitanao fa tsy mora ny manamboatra izany, dia hifindra any amin'ny olona manaraka izy ireo.
Mankanesa any Trip Island
Nosy Tantaran'i Taboga, kilaometatra vitsy monja miala ny tanibe Panameana, dia manana tantara mahaliana ary manolotra tora-pasika tsara. Misy fiaramanidina fialam-boly sy fitsangatsanganana tsara eny an-tanety, ary ny rano manalavitra ilay nosy dia tian'ny mpikaroka ambanin'ny tany. Antsoina hoe Nosy Flowers izany, ary hahafinaritra anao ny mamantatra ny toerana sy ny haitao any amin'ny tontolo iray izay tsy dia mampihomehy loatra raha oharina amin'ny tanànan'i Panama.
Ny fandehanana an-tsambo mankany Taboga dia sarotra arakaraka ny haingam-pandeha. Ny fiakaran'ny haingam-pandeha dia handany $ 20 isan-kerinandro, fa ny fitsangantsanganana kely kokoa amin'ny Calypso King, mpizahatany, dia $ 14 mandroso. Ny sambo dia nandao ny marina tamin'ny 8 ora sy sasany maraina, fa jereo ny fandaharam-potoana amin'izao fotoana izao.
Aza manantena fanompoana maimaipoana
Ao amin'ny tanànan'i Panama, sy ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, ny fisakafoanana dia fotoana iray ahafahana mahazo alalana mandritra ny ora maromaro miaraka amin'ny namana. Ny serivisy dia voaofina mba ho sariaka sy ho sariaka, fa ny haingana dia tsy miditra amin'ny fitambarana. Mieritrereta mialoha. Aza mandefa fitsangatsanganana tsy azo aloa avy hatrany aorian'ny fijanonana mandritra ny sakafo antoandro raha tsy miorina amin'ny fotoana fohy. Ny tena zava-dehibe dia mahafinaritra ny manazava ny traikefa fisakafoanana amin'ny toerana vaovao. Avelao ny tenanao toy izany.
Nekena avokoa ny US dollar
Ny vaovao tsara eto dia tsy handoa na inona na inona amin'ny fifanakalozana vola ianao. Hialana amin'ny fandaniana tsy mendrika indrindra ianao. Ny vaovao ratsy dia tsy hahasoa anao na oviana na oviana ny tahan'ny dolara amerikana. Tsy mamokatra vola taratasy i Panama, saingy misy ny vola madinika Panameana amin'ny lamina mitovy amin'ny an'ny US vola. Andramo ny mandany vola madinika ao Panama. Ara-teknika, tsy ara-dalàna ny fampiasana azy ireo any amin'ny milina fanofanana amerikana.
Mivarotra eo amin'ny tsenan'ny Artisan ao amin'ny YMCA ao Balboa
Eo akaikin'ny fihaonan'ny Avenida Arnulfo Arias Madrid sy Amador Causeway, dia hahita tranobe YMCA ianao izay mampivelatra tsena lehibe ho an'ireo mpanakanto teratany. Raha ny marina, tsy ny rehetra akory no zavakanto. Saingy tokony ho afaka hanavaka ny tantsaha mpizahantany ianao ary ny mendrika hividy. Anisan'ireo fahatsiarovana manintona indrindra avy any Panama i Molas, akanjo amam-bika tena mendri-panazongozon-tena noforonin'ireo mpanakanto indizeny Kuna sy Emberá.
Tsy lavitra ny tsenan'ny YMCA ny Kuna Cooperative, afa-tsy amin'ny fanolorana asa tanana Kuna.
Tsy ilainao ny mandoa vola be ho an'ny kilasy voalohany
Any amin'ny tanàna maro, ny fomba fijery tsara tarehy sy ny fisakafoanana dia mitaky loha lafo amin'ny trano fisakafoanana tsara tarehy. Fa ny MultiCentro Mall dia afaka manolotra ny iray amin'ny fomba fijery tsara indrindra avy amin'ny trano fivarotana sakafo ara-barotra Ny sakafo fisakafoanana dia sakafo haingana sy ny vidiny mifanaraka. Rehefa avy mametraka ny baiko, dia mandehana any amin'ny faritra fisakafoanana. Manome rindrin'ny rindrina izy io miaraka amin'ny fomba fijery manjavozavo eo amin'ny reniranon'i Panama City.
Mamaritra ny lozam-piaramanidina Taxi alohan'ny fialany
Amin'ny ankamaroan'ny faritra, taxi-taxi no tsy manana metatra. Ny mpandeha matetika dia mandany ny vidin'ny fiaranao araka ny ora sy ny halaviran-dalana, saingy misy fiovàna goavana amin'ny vidiny. Noho izany antony izany, tsy maintsy mifanakalo vidiny alohan'ny handehanana. Tsy ilaina ny fifampiraharahana lava, fa aza matahotra ny hifindra amin'ny mpamily hafa raha avo loatra ny vidiny. Tadidio fa ny ankamaroan'ny tanàna dia miditra ao amin'ny lozam-pifamoivoizana $ 10, fa mahazatra kosa ny mpamily misimisy kokoa raha mihevitra izy ireo fa tsy dia fantatry ny mpandeha ny vidiny.
Fantaro hoe avy aiza ny seranam-piaramanidina
Ny fotoana dia vola mandritra ny fialantsasatra, ary ny tsy fahampian'ny rivotra dia lafo ihany koa. Noho izany, esory ny tsy fisian'ny fampielezana mahazatra eo amin'ireo mpizahatany ao Panama City. Ataovy azo antoka fa takatry ny mpamily taxianao hoe iza amin'ireo seranam-piaramanidina ao an-tanàna no tanjonao farany. Tocumen Airport (PTY) dia lehibe ary manompo ireo lalana iraisam-pirenena. Ny seranam-piaramanidina Albrook (PAC), foibem-paritra Amerikana teo aloha, dia kely kokoa ary manodina lalana mankany amin'ny faritra hafa ao Panama . Izy ireo dia eo ampitan'ny tanàna. Mety hitera-bolana ny fisavorovoroana.
Torolalana ho an'ny dia mankany Panama
6 antony hitsidihana ny nosy San Blas ao Panama
Torohevitra momba ny Budget Travel Bocas Del Toro
Ahoana ny fahitana ny tanànan'i Panama sy ny lakandranon'i Panama amin'ny teti-bola
Mandeha Mandeha Mandeha Mandeha Mandeha Mandeha Mandeha Mamakivaky Pusty Any Oxfordshire
Aza manalavitra ireo alahelon'ireo hotely roa ireo
Torohevitra ho an'ny Travel Solo miaraka amin'ny Group Tour
Toro-hevitra momba ny hatsikana momba ny hatsikana avy any India Hicks: Model, Designer, Pro Traveler
Top 6 Toeram-ponenana Mijery Ny Fahavaratra Any Alemana
Ny fomba hahatongavana ho mpilatsaka an-tsitrapo ao St. Louis
Herinandro polisy nasionaly 2017: Washington DC
Aiza no ahazoanao ny kiraro tsara indrindra any Minneapolis
Ny faritra Jura ao amin'ny Guide Orient Eastern France
Mety ho velona ve i Elvis Presley?
Torohevitra amin'ny fijanonana ao amin'ny Hotely Ice